Amasu ama-4 Wokunciphisa Ubungozi Bokukhohlisa Okuxhaphakile | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 22, 2015 NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2015 Douglas Karr
I-Digital Advertising kungenzeka ukuthi ibe yizindleko eziphezulu kakhulu zokukhangisa ngabezindaba ngo-2016 ngokusho comScore. Lokho futhi kukwenza kube ilitshe elingenakuphikiswa lokukhwabanisa ngokuchofoza. Eqinisweni, ngokusho kombiko omusha wokukhwabanisa embonini yezokukhangisa online, ingxenye eyodwa kwezintathu yazo zonke izindleko zokukhangisa izomoshwa ngokukhwabanisa.
Distil Amanethiwekhi futhi I-Interactive Advertising Bureau (IAB) bakhiphile Umhlahlandlela Womshicileli Wedijithali Wokulinganisa Nokunciphisa Itraffic Bot, umbiko ohlola inkinga yanamuhla yokukhwabanisa kwezikhangiso zedijithali.
Ukhiye Wokutholwa Kokukhwabanisa
Abashicileli abangama-75% kanye nabakhangisi abangama-59% abakwazi ukucacisa ithrafikhi yabantu uma kuqhathaniswa nabangewona abantu.
I-Skewed analytics (50%) nokukhwabanisa okuholayo nokubhaliswa okungamanga (32%) nakho kubalulekile izinkinga ezingezona ezezimoto zomphakathi kubashicileli nakubakhangisi.
Ukukhwabanisa ngokuchofoza nokubonisa yizinto ezikhathaza kakhulu bobabili abashicileli (i-86%) nabakhangisi (100%) uma kukhulunywa ngezinkinga zethrafikhi yewebhu.
Lo mbiko ujule ngokumangazayo futhi uhamba nabashicileli nabakhangisi ngokusebenzisa indlela ukukhwabanisa okusebenza ngayo kanye namasu okunciphisa ubungozi, kufaka phakathi:
Performance - Gxila kancane ezinombolweni eziluhlaza nokuningi kuzenzo ezibonakalayo. Faka amamethrikhi wokusebenza akhuthazwayo we-ejensi yakho ukuqinisekisa imiphumela esezingeni lebhizinisi.
Ziba Ukubukwa - Ukubukeka kufakwa kalula ngama-bots nokunye okungekho komuntu.
Quality - Isabelomali sekhwalithi, hhayi ubuningi. Nika imali kude nezindawo ezinemisila emide ekushintshanisweni kwezikhangiso, lapho ukukhwabanisa kudlange khona kakhulu futhi kuthengwa uhlu lwezimpahla kumasayithi amakhulu, we-premium.
Funa Ukubonisa Okusobala - Uma abahlinzeki bakho be-ejensi noma besikhangiso bengenakukukhombisa lapho isikhangiso ngasinye
umbono uhanjisiwe, ungawasebenzisi.
Landa Umhlahlandlela Womshicileli Wedijithali Wokulinganisa Nokunciphisa Umgwaqo weBot
Tags: ukukhwabanisa kokukhangisaInhlangano yaseMelika Yezinhlangano Zokukhangisaesithi asifane nesika ANAInhlangano Yabakhangisi Kazwelonkechofoza inkohlisoDistil AmanethiwekhiIABI-Interactive Advertising Bureautraffic okungewona umuntuingozitagiqembu elithembekile lokuphendula
Izimboni ezi-5 ziguqulwe kakhulu yi-Intanethi
I-Oct 29, i-2015 ku-7: i-25 PM
Sawubona Douglas- le ndatshana ihlanganisa inhlawulo ngesihloko sokukhwabanisa kokuchofoza, kepha asinikezi isixazululo sangempela, ngoba ukukhwabanisa kokuchofoza kungahle kungabi ngaphansi kwethrafikhi njalo. Umqondo kungaba ukuqaphela kakhulu izilungiselelo ezihlobene nokukhonjwa kwe-geo (njengalezo ezingaphansi kwe- + Izinketho ezithuthukisiwe). Futhi, usebenzisa isoftware ezinikele, njenge http://www.xionagrup.ro kungaba umbono omuhle kakhulu, noma ukusebenzisa abacwaningi bama-log ukubona ukuthi ama-IP noma amakilasi achofoza kuzikhangiso zakho.